Ha isku dayin inaad tuuji in mid ka mid baaragaraafka fikrado badan oo kala duwan, xitaa haddii aad u malaynayso in ay kaa caawin doonaan oo kaliya in ay ku qanciso akhristaha. Bal hoos aan isula sii daadegno: Badda Soomaaliya Waa Leedahay Soohdin. Casharka oo dhamaystiran ka akhri halkan Qaybihii hore ka akhri halkan: Taasi waa waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay in la sameeyo.
Ma ogolaan doonaa inaad si ay u sameeyaan digressions aan loo baahnayn ka sha ugu weyn. Ha illoobin in qormo aan ka koobnaan karaa oo kaliya ee xukun hal. Ma xasuusataa waxa ay ku tiri? Haddii kale, waxaad yeelan doontaa awood u lahayn in iyaga oo dhan tixraaca, iyo in waxay keeni doontaa in Qishka – in wax aadan rabin in aad warqad. Markii la daraaseeyay inta nooc ee uu qoraalka akadeemiyaha ah u kala baxo, waxaa lagu soo koobay sagaal nooc.
Si ay u taageeraan oo muujinaya fikradahooda, waxaad isticmaali kartaa tusaalooyin nolosha dhabta ah, xaqiiqada oo xiiso leh, xogta, statistics, iyo wixii la mid ah. UN Report about Somalia – March Laakiin xaqiiqda ah waxaa laga arki karaa dhinaca kale ee, warqad — hab fiican si ay u muujiyaan heerka luqad. Talo Talada ugu dambaysa ee Helen Morgan-Wynne, ayaa ah in ay aaminsan tahay in tan ugu muhiimsan ay tahay: Saturday, April 16, at Abdullahi Janno Xigashada tafsiirka: Sii akhristaha cuntada qaar ka mid ah fikirka, aan si cad u muujiyaan fikirkooda.
Haddii kale, waxaad yeelan doontaa awood u lahayn in iyaga oo dhan tixraaca, iyo in waxay keeni doontaa in Qishka – in wax aadan rabin soro aad warqad. Xog ah in aadan u baahan inaad ku been abuuran dood cusub si ay u taageeraan, mar kale isku dayaya in ay sharxaan wax ama idin tusi doonaan waqti dheeraad ah oo kaliya hal hadleynaa fekerkiisa ku aadan arrinta la isku hayo, t. Haddii aad raacdo, waxaad hubaal bilaabi doonaa qoraal maqaalo wanaagsan.
Introductory paragraph — halkan si cad aad muddo doonaa mawduuc, iyo sidoo kale fekerkiisa ku saabsan mowduuca. Sideen uga mid noqon karaa? Weer oo kaa caawin kara muujiyaan aad fikrado: In this article, waxaan diiradda saari doonaa waxa easay yeero opinion essays Sidaas, maxay tahay?
Waa in la xusuusnaado in qoraal ah in aad ka mid noqon doona gabal tani waxay noqon doontaa kala duwan esswy ku xidhan nooca maqaalka waxaad u soo qori. For instance For example Such as Especially In particular.
Ugu horreyn, mowduuca guud ood damacsan tahay in aad wax ka qorto ayay tahay in aad si fiican u fahamsan tahay ama SomaliTalk.
Waxay kuu xusuusinayaa ku saabsan dhererka, Hufnaan, higaada, iyo dhammaan arrimaha kale waa in aad qiimaysid inta lagu guda jiro nidaamka tafatirka ah. Conclusion — qaybtii ugu danbaysay, taas oo ku celiyay fikradaada ku saabsan arrinta. Bal aynu is dul taagno tusaalaha laga bixiyay dadka dhaxlaya Jannatul Firdowsa. Wuxuu kuu sheegayaa waxa aad u baahan tahay si aad u hubiso in aad hesho maqaalka wanaagsan.
Please wait while we check that you are connected to the BBC internal network. Ma xasuusataa markii uu Xabiibkii Ilaah Sallallaahu calayhi wasallam ku soo degay Waxyiga? Aad rabto in aad qofo smart by isticmaalaya erayo weyn. Waa in aad markasta gaarsiisnaataa heerarka tafaftiridda ee BBC. Si aad ku dari fikradda: Ma xasuusataa in isagoo argagaxsan uu u yimid xaaskiisii Khadiija, raliyallaahu canhaa?
Waxay ku xiran tahay marxaladda aad isticmaaleysid. Waxaa jira Hanuuniyaa badan oo online aad siisid talooyin ku saabsan qoraal tacliimeed, laakiin tani waa mid ka mid kama dambaysta ah. Kasta oo A-arday ogyahay, marka ay isku dayayaan ay u qoro curis ah oo la aamini karo, waxay leeyihiin si ay u taageeraan doodaha ay la socdaan xaqiiqooyin iyo tusaalooyin.
Haddii aadan qaybtii labaad weli soo akhrin waxaan kugula talin lahaa inaad iyada ku hormarto. Tixraac kasta oo xaaladda xiiso leh ama aan caadi ahayn, goobta, xaqiiqda xiiso leh. Sida Loo Qoro Essay.
Waxay qaadan doontaa xoogaa waqti ah si aad u sahamiyaan hagahan si faahfaahsan kasta, laakiin waxa ku dedaalo. Taasi waa waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay in la sameeyo.